Inelanga, inendawo evulekileyo, itofotofo ibhedi enye, neendawo ezintle onokuzibona. - I-Airbnb
Inelanga, inendawo evulekileyo, itofotofo ibhedi enye, neendawo ezintle onokuzibona.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJose Maria
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uJose Maria iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi lokulala elinye elivulekileyo nelanga elinekhitshi elinento yonke, igumbi elikhulu elihle lokuhlala/igumbi lokutyela elinendawo entle nebhalkhoni, igumbi lokulala elilala abantu ababini negumbi lokuhlambela.
Le flethi ikumgangatho we-6 wesitrato sokuhlala, ineelifti ezimbini kwisakhiwo, ngoko ibonakala kakuhle kakhulu, ikude ukuya kumzantsi, ngaphandle esixekweni nangaphandle kweenduli ngaphaya. Ukuba kumzantsi ojongene nokukhanya kwelanga kugcwala iflethi imini yonke. Ukuba ulapha ehlotyeni kukho indawo enomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwigumbi lokuhlala ukuba uyafuna. Ebusika, ilanga kunye nento eyenza kufudumale igcina iflethi itofotofo kwaye ifudumele, ineeradiyetha kwigumbi ngalinye.
Ikhitshi elicocekileyo linetafile nezitulo, ifriji enkulu/i-freezer, umatshini wokuhlamba impahla nayo yonke into oyifunayo xa ufuna ukupheka.
Igumbi lokuhlala/igumbi lokutyela linesofa enkulu netofotofo emile okanokutsho, itafile nezitulo eziyi-6 nefenitshala yeplanga. Iminyango yeveranda ephindwe kabini ikhokelela kwibhalkoni.
Igumbi lokulala elilala abantu ababini linebhedi eyi-135cm enomatrasi omfumamfuma ophezulu, iigawuni eziyi-3 ezakhiwe ngaphakathi ezineminyango enezipili, ibhokisi yeedrowa neefestile ezinde. Sinebhedi yokuhamba esinokuyibeka kwigumbi lokulala ukuba unento encinci.
Igumbi lokuhlambela lisecaleni kwegumbi lokulala kwaye lineshawa/ibhafu eneminyango yeglasi esilayidayo, indlu yangasese kunye neesinki ezimbini ezinezipili ezininzi kunye nendawo yokugcina.
(Kukho igumbi lesibini elitshixwayo elinezinto zethu ezigcinwe kulo.)
4.73 · Izimvo eziyi-52
Indawo efanelekileyo phambi kwesikhululo sebhasi kunye nemizuzu emihlanu yokuhamba ukusuka ePilar Square, ephakathi esixekweni. Iivenkile ezinkulu ezahlukahlukeneyo zihamba imizuzu embalwa, kunye neevenkile ezininzi, iibhari kunye neevenkile zokutyela. IGasset Park enkulu kunye nelayibrari yesixeko esidibanisayo nazo ziphantsi kwendlela, njengoko kunjalo nakwiifilimu zesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Jose Maria
Abanikazi abakho kwindawo ethe tyaba kunye nawe, kodwa siyakuvuyela ukukunceda xa uyidinga, kwaye uphendule imibuzo. Sinokuthetha isiNgesi nesiSpeyin ngokutyibilikayo.